LELIPHI IJELO LETV IBURNLEY V ARSENAL ELIKUYO? KHABELA IXESHA KUNYE NOKUSASAZA NGQO-IRADIO TIMES - IBHOLA EKHATYWAYO
Leliphi ijelo umdlalo weBurnley v Arsenal Premier League? Khaba ixesha, usasaze ngqo kunye neendaba zeqela zamva nje
Eyona Ibhola Ekhatywayo
IArsenal iya kuba nethemba lokuqalisa ngokuphumelela i-3-1 e-Leicester kwimpelaveki ephelileyo nolunye uloyiso kude-ngeli xesha eBurnley-ngoMgqibelo.
IGunners inyanzela ukubuyela kugqatso lwendawo yaseYurophu kule sizini, kodwa ifuna amanqaku ebhodini ngokuchasene namaqela asezantsi etafileni.
UBurnley ubethe iArsenal yabuya ngoDisemba kwenye yezinto ezimbalwa zePremier League kule sizini apho abalandeli bebekhona.
Bukela iBurnley v Arsenal kunye nokupasa kweBT Sport ngenyanga
Eso siphumo sothusayo sinyuse kakhulu ithemba lokusinda kweClarets kwaye beza kule iqhina neentloko zabo ngaphezulu kwamanzi kumlo wabo wokuphepha ukuthotywa.
Nokuba uBurnley angayikhupha enye into engalindelekanga kwiGunners iya kuhlala ibonakala-kodwa umphathi weArsenal uMikel Arteta uzimisele ukubona lo mdlalo ngokukhawuleza.
RadioTimes.com ujikeleze yonke into oyifunayo malunga nendlela yokubukela iBurnley v Arsenal kwiTV nakwi-Intanethi.
Landela iphepha lethu elitsha le-Twitter: @RadioTimesSport
Iba nini iBurnley v Arsenal kwiTV?
IBurnley v Arsenal iya kuqhubeka NgoMgqibelo umhla we-6 kuMatshi ngo-2021 .
Jonga eyethuphila ibhola ekhatywayo kwiTVIsikhokelo samaxesha amva kunye nolwazi.
Iya kuqala ngabani ixesha?
IBurnley v Arsenal iya kuqala 12:30 pm .
Kukho imidlalo emininzi yePremier League eqhubeka kule mpelaveki kubandakanya iManchester City v neManchester United, eqala nge-4: 30 ngokuhlwa ngeCawa.
Leliphi ijelo leTV iBurnley v Arsenal elikuyo?
Umdlalo uza kuboniswa bukhoma BT Imidlalo 1 ukususela ngo-11: 30 kusasa.
Zininzi iindlela zokufumana iBT Sport. Ukuba sele unayo iBT Broadband, ungongeza i-BT TV kunye neMidlalo kwisivumelwano osele usenzile ukusuka nje £ 15 ngenyanga . Unokongeza iphakheji 'yezeMidlalo eNkulu' nge- $ 40 ngenyanga ebandakanya zonke i-BT Sport kunye ne-11 Sky Sports channels ngokudlula ngoku kweTV.
Jonga izivumelwano zamva nje zeBT Broadband kunye neBT TV
Uhlala njani ukusasaza iBurnley v Arsenal kwi-Intanethi
Ungawubukela umdlalo nge Ukupasa kweBT Sport ngenyanga ngaphandle kokutyikitya isivumelwano.
Ababhalisi abaqhelekileyo banokusasaza umdlalo kwiwebhusayithi ye-BT Sport okanye kwi-BT Sport app kwizixhobo ezahlukeneyo kubandakanya iilaptops, ii-smartphones kunye neetafile.
Iindaba zeqela likaBurnley v Arsenal
UBurnley: URobbie Brady ukalwe ngo-50/50 ukuba abonakale apha emva kokuphosa umzobo waphakathi evekini neLeicester.
UJohann Berg Gudmundsson naye angabuya kodwa uAshley Barnes uphumile.
IArsenal: U-Emile Smith Rowe kuphela kwenkxalabo yokwenzakala kumphathi u-Arteta, kwaye umntwana angabakho ngoMgqibelo ukuba angayifumana ingxaki yomlenze.
Ngaphandle kwalonto, uArteta uneqela elulungeleyo ngokupheleleyo ukuba angakhetha kulo. Lindela i-XI efanayo naleyo yabetha iLeicester ngeCawe ephelileyo, kunye noNicolas Pepe onokuthi aqale kwakhona.
I-Burnley v Arsenal iingxaki
Ngokubambisana neRadio Times, ukubheja ubonelele ngezi meko zilandelayo zokubheja kulo msitho:
Ukubetha okungu-365: UBurnley ( 4/1 Zoba ( 10/23 IArsenal ( 1/1 ) *
Kuzo zonke iingxaki zakutshanje zePremier League nangaphezulu, ndwendwela ukubheja365 namhlanje kwaye ubange iakhawunti evulekileyo yokufumana 'ukuya kuthi ga kwi-100 yeekhredithi kwii-Bet Credits **', usebenzisa ikhowudi yebhonasi 'RT365'.
* Amanqaku aphantsi kotshintsho. 18+. Ii-T & C ziyasebenza. BeGambleAware.org. Qaphela - Ikhowudi yebhonasi i-RT365 ayitshintshi mali yokubonelela nangayiphi na indlela.
Uqikelelo lwethu: UBurnley v Arsenal
IArsenal iyintandokazi ukuya kule ntlanganiso kwaye ngethamsanqa uArteta umphathi uneqela elikufutshane ngokupheleleyo anokukhetha kulo.
Ukanti nangobuninzi beetalente anazo azange kuthintele uBurnley ahluthe isiphumo se-1-0 e-Emirates emva kweyoMnga.
Kwiphepha, iArsenal kufuneka iphumelele le ntambo kakuhle. Banokuvuthela uBurley kude okanye baphele kwisikrweqe sokwenyani. IiClarets ziya kulwela yonke ibhola kodwa iindwendwe kufuneka ziyincothule.
Uqikelelo lwethu: IBurnley 0-2 Arsenal ( 7/1 e ukubheja )
Jonga ukwenziwa kwethu ngokutsha Ixesha lebhola ekhatywayo podcast Iqukethe iindwendwe ezikhethekileyo, iingcebiso zeFPL kunye nokujonga kuqala umdlalo apile / Spotify / Acast .
Ukwaphuka ngokupheleleyo kweyiphi imidlalo ezayo jonga eyethu Imidlalo yeNkulumbuso kwisikhokelo seTV.
Ukuba ujonge enye into oza kuyibukela jonga eyethu Isikhokelo seTV .
indlela yokudibanisa kwakhona i-zipper kwijacket
uluhlu lwabadlali bakaJames bond
dlala ixesha lokugqibela lokukhaba
iphi i-villa yesiqithi sothando ngo-2019
nini uhlaziyo olulandelayo lwe-fortnite
yintoni kwiAmazon prime